Eyonwabileyo kwiChibi laseNepahwin
Wamkelekile kwindawo yethu yokuphumla epholileyo yasemanzini, kanye embindini wesixeko! Ibonisa indawo yokuhlala evulekileyo, igumbi lokulala elikhulu elibanzi kunye negumbi lokulala lesibini elinebhedi enkulu. Yonwabela ikofu yakho yasekuseni kunye nembono entle yeLake Nepali. Siyathemba ukuba uyalithanda icwecwe lethu leZulu njengoko sisenza :)
Sithenge eli khaya ngethemba lokwenziwa komgangatho ongaphantsi ngeKrisimesi. Ngelishwa, akwenzekanga, kodwa besisafuna ukuyidwelisa ku-Airbnb kwaye iintsapho neendwendwe zizonwabele. Nceda uqaphele ukuba kukho ishawa yokumisa kuphela (akukho bhafu) ngeli xesha. Idekhi kunye nesauna zintsha ukusukela ngoJuni ka-2021.
Le dollhouse kwisitrato sokuhlala, kunye nokufikelela echibini kunye neembono zamanzi.
Asihlali kwipropathi, kodwa sitsalela umnxeba ukuba kukho naziphi na iingxaki ezinokuvela :)